Kamera IQ: Shandisa Yakawedzera Chokwadi (AR) Kugadzira Virtual Chigadzirwa Edza-Ons | Martech Zone
Kamera IQ, isina-kodhi dhizaini chikuva cheAugmented Reality (AR), yakatanga Virtual Edza-PaMunyori, ye-state-of-the-art dhizaini dhizaini inoita kuti ikurumidze uye nyore kumakambani mune runako, varaidzo, zvekutengesa, uye mamwe matunhu kuvaka hunyanzvi AR-yakavakirwa Virtual Edza-On zvakaitika. Mhinduro nyowani inofungidzirazve kutengeserana kweAR nekugonesa mabhenji kuti agadzire zvigadzirwa zvavo nekururama-ku-hupenyu kurongeka uye kwechokwadi pavanenge vachiwedzera rondedzero yezvinhu zvine mazita uye zvakasarudzika zvinobudirira izvo zvinoita uye zvinokurudzira vatengi kuburikidza nemakamera avo.
Nepo dzimwe mhinduro dzichida nguva-yakasimba kunyora uye nzira dzekumisikidza kana kugadzirwa kwakakura uye kusimudzira, Kamera IQ's Virtual Edza-PaMunyori inoita kuti zvive nyore kumakambani kuvaka akaomesesa, akagadziriswa akawedzera echokwadi (AR) zviitiko pachiyero muchikamu chidiki chenguva, ne hapana kukodha kunodiwa. Icho chishandiso chinopa rondedzero yemaitiro ekugadzirisa ayo anopa mabhureki kuchinjika kwekugadzirisa zviri nyore zviitiko zveAR nemaparamende akasarudzika senge ruvara, chimiro, magadzirirwo, kupedzisa, uye zvimwe. Kana ivo vanogona kungoisa zvavo zvavo 3D mhando, uye iyo Virtual Edza-PaMunyori otomatiki anoshandura zvigadzirwa mukamera kuti zvigone kuverengerwa mune chero mushandirapamwe.
Kusiyana nezvimwe chaiyo yekuedza-tekinoroji, on Kamera IQ, mabrands anogona kusimudzira yavo Yekuyedza-Pane zviitiko neakasiyana graphical zvinhu zvakagadzirirwa kugadzirisa kusangana, kudyidzana, uye kugovana. Iyo Yechokwadi Edza-PaMunyori anouya neraibhurari yemakomputa matemplate akagadzirirwa kuzadzikisa chaiwo mabhizinesi zvinangwa sekuwedzera ruzivo rwechigadzirwa kuvhurwa, kutyaira kutengesa pamwe nekuona kwechigadzirwa uye kunyorera, kudzidzisa vatengi mashandisiro ekushandisa chigadzirwa chavo, nezvimwe. Mhando dzinogona kugadzirisa aya maAAP matemplate, uye kunyatso dhizaini maficha ezviitiko zvavo nekuwedzera zvinokonzeresa kuti zviitike kuti zviitike kana zviito zviitike pane zvimwe zvinokonzeresa, senge mushandisi anovhura muromo wavo kana kubata chinhu. Kamera IQ inozoisa zviitiko zveAR pachiyero paFacebook, Instagram, Snapchat, uye mamwe mapuratifomu, zvichigonesa vateereri kuvhura yavo yekugadzira vachiyedza pazvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
Iyo yazvino Kamera IQ kuburitswa iri mutambo-shanduko yechikwata changu. Iyo UI nyowani yakanakisa uye inonzwisisika. Iko kugona kwekuwedzera 3D zvinhu uye kuzvishandisa mune yechokwadi nharaunda ye3D zvinoita kuti tikwanise kutora edu ekusika kuuraya kune inotevera nhanho nekukurumidza uye nyore.
Doug Wick, Zvemukati Dhizaina Director kuNestlé Purina North America
Kamera IQ Yechokwadi-Edza-PaMunyori
Kamera IQ inogonesa mabhenefiti kuti abatanidze vateereri uye vatengese zvigadzirwa kanenge kese pamabatiro erwendo rwevatengi. Vachishandisa yavo isina-kodhi dhizaini chikuva cheA AR kutengeserana, vashambadziri vanogona kushandura zvigadzirwa zvavo uye meseji meseji kuva akapfuma akawedzera chokwadi chiitiko kune chaicho kuyedza-uye vatengi mushandirapamwe pasocial.
Seboka repasirese rinoshandira zvigadzirwa zvepasi rose seViacom, Atlantic Records, Nestle, EA, MAC Zvizoro, Kure, nezvimwe, Kamera IQ inoshanda kumabhizimusi kuita mamirioni evatengi zuva nezuva.
Iko hakuna kupokana mukubudirira kweAAR kune chaiwo kuedza-ons, asi iwo anongova mavambo ezvinogona kuitwa neAR kuunza mabrandi nevateereri vavo padhuze pamwechete. Kwete chete kuti AR inotyaira zvemabhizimusi enharaunda nekubatsira vatengi kuona zvigadzirwa, asi zvinovagonesa kusangana nemabhurandi munzira nyowani kuburikidza nekuita kwekusika-kusika. Kana mabrands achiroora chinoshandiswa uye kunakidzwa kweAR, ndipo pavanoona kukona kukuru kune yavo ROI: kubatanidzwa mitengo inokwira, uye mukana wekushandurwa unowedzera ne250%. Isu takaparura iyo Virtual Edza-PaMunyori anobatsira mabhenefiti kukurumidzisa yavo yekutengesa zano, kudzikisa budiriro zvipingamupinyi, uye zviite nyore kusimba kuvaka inoshanda uye inobata zviitiko zveAR. Iye zvino chero mhando inogona kuve AR mugadziri!
Allison Ferenci, CEO uye co-muvambi weKamera IQ
Kupemberera kuvhurwa kwechigadzirwa chitsva cheVirtual Try-On, Kamera IQ yakabatana nevanhu vane mukurumbira uye vanopa mibairo-vanogadzira maartist anosanganisira. David Lopez, Keita Moore, Doniella Davy, uye Erin Parsons kugadzira zvigadzirwa zvemadhijitari izvo zvinoteedzera zvechinyakare zvigadzirwa zvekugadzira Mavara erunako anogona kupa vateereri vavo simba kuti vaedze pane chero musanganiswa wemiromo, kutsvuka, eyeshadow, eyeliner, eyelashes, kana zvishongedzo, zvese zvine hyper-chaiyo mavara, maumbirwo, magadzirirwo, magumo, uye zvimwe zvinhu kuti zvienderane nezvazvino zvigadzirwa zvepasirese.
Zvitengesi zvinotengesa zvinogona nyore kudhirowa zvigadzirwa zvavo zvepanyama kuti vagadzire zviitiko zvinobvumidza vatengi kuona kuti zvigadzirwa zvavo zvinowoneka sei munyika chaiye, kana mimhanzi zvigadzirwa zvinogona kubvumidza mafeni kuti vadzokerezve siginicha yemuenzi kubva muvhidhiyo kana kavhodhi yeakaunzi. Iyo chiyero cheVirtual Edza-Pane zviitiko zvinogona kuvakwa muKamera IQ's Muumbi hazvigone.
Edza Kamera IQ's AR Kumbira Demo
Tags: Augmented realitykamera iqecommercechigadzirwa edza-onchigadzirwa chaicho edza-onVirtual Edza-PaMunyorichaiyo yekuedza-tekinoroji
YouTube: Maitiro Ekupa Iyo Yako Agency kana Videographer NeMushandisi Kuwana Kune Chiteshi Chako